Ọ bụghị maka gị ... | Martech Zone
Enwere ụlọ oriri na ọ Thaiụ Thaiụ Thai dị nso na-arụ ọrụ mara mma n'ọtụtụ efere. Otu ọkacha mmasị m bụ Red Curry. Nri jupụtara na akwụkwọ nri Thai ma na-ekpo ọkụ. Echeghị m na ọ bụ otu n'ime nri ha kachasị ewu ewu… Pad Thai na painiapị ha ghere eghe ha yiri ire.
Ahụtụbeghị m ndị enyi m ịtụ Red Curry… na ama m na ndị ezinụlọ m anaghị ekele ya dịka m si eme. Anaghị m akwụ ụgwọ ọ bụla. Anyị niile nwere uto dị iche iche. Ọ dị mma, ọtụtụ ndị enyi m agaghị eso m gaa n'ụlọ nri… nri Thai dị oke iche na ha agaghị anwale.
Yabụ… ọ bụrụ na m ga-emepe ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ọ nwere ike ọ gaghị abụ ụlọ oriri na ọ Redụ Redụ Red Curry. N’ezie, enwere m ike ịnwale efere iji hụ ma ọ masịrị mmadụ, mana ọ bụrụ na achọrọ m ka ụlọ oriri na ọ toụ restaurantụ ahụ wee bụrụ onye ama ama, m ga-etinye ihe na menu nke na-adọta ndị ahịa. Echiche m adịghị mkpa ebe ọ bụ na abụghị m onye nchebe.
Nnukwu ụlọ nri Gee ndị na-elekọta ha ntị. Ha na-edere efere ndị a ma ama, na-anwale efere ọhụrụ, ma na-ewepụ nri nke ọ na-adịghị onye na-eri.
Kedu ihe nke a na - eme na azụmaahịa? Ọfọn, ọ bụ akụkọ yiri nke ahụ ịbụ ụlọ ọrụ. Anyị nwere ụfọdụ ndị ahịa hụrụ saịtị ha n'anya, hụrụ ọdịnaya ha n'anya, hụ ndịna-emeputa ha n'anya… mana ha anaghị enweta azụmaahịa ọ bụla na saịtị ahụ. Anyị mepụtakwara Infographics ole na ole maka ụlọ ọrụ ndị na-enwetụbeghị ìhè, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ha mara mma ma mara ezigbo mma. N'ihi gịnị? N'ihi na ahịa adịghị amasị ha… ma ọ bụ na-amasị ihe banyere ha.
Mgbe m nụrụ ka onye ahịa na-ekwu, "Enweghị m mmasị na ya!", Ọ na-ewe ntakịrị nkụda mmụọ. Chọpụta, e nwere ihe akụkụ nke ahịa afọ ojuju na anyị kwesịrị nzukọ… ma mgbe gị inbound ahịa na-adịghị na-amụba ọ bụla na-eduga, ị na-n'ezie na-aga n'ihu na-adabere na gị echiche? Echeghị m otu ahụ, yabụ ana m agwa ha ka ọ dị… “Mana ọ bụghị n'ihi na gị. ”
Aga m asị gị ya, kwa. Ebe nrụọrụ weebụ gị bụ ọ bụghị maka gị. Gị blog bụ ọ bụghị maka gị. Ihe omuma gi bu ọ bụghị maka gị. Ibe ọdịda gị bụ ọ bụghị maka gị. Mgbasa ozi gị bụ ọ bụghị maka gị. Not gaghị azụta otu mpempe akwụkwọ ị ga-atụgharị n’ụlọ ọrụ gị. Ebe nrụọrụ weebụ gị bụ ọnụ ụzọ ámá maka ndị ọbịa ịchọpụta ngwaahịa na ọrụ gị yana nke ahụ na-eduga ha… site na atụmanya ndị ahịa.
Y’oburu n’icho ime ka ahia inbound gi ka nma inweta ihe nlere na ntanetị, ikwesiri ibido imepe atumatu gi ahịa n'uche. Gịnị na-adọta ha? Kedu ihe ga - eme ka ha pịa? Kedu ihe ga - eweputa ndu? Echiche gị agaghị eme ka ị nweta ahịa n'ịntanetị. Nnwale na ige ndị ọbịa gị ntị, ọ bụ ezie. Cheta…
Ọ bụghị maka gị.
Tags: ụlọ ọrụgị n'ụlọnga
Jul 6, 2011 na 10: 31 AM
Achọrọ m itinye otu post blọgụ a na ntinye ọ bụla anyị dere. Dị ka otu ndị na-emepụta ihe, n'oge na-adịghị anya, anyị ga-anụ okwu ndị ahụ n'aka onye ahịa, ọ na-akụda mmụọ mgbe anyị matara na anyị etinyere akara ahụ.
Jul 6, 2011 na 1:25 PM
GOST Post. M na-eche mgbe ụfọdụ anyị nwere obi ụtọ dị ukwuu banyere ịrụ ọrụ nke anyị nwere ike ime ya gbasara onwe anyị, nke bụ ihe megidere ihe anyị kwesịrị ime. Edere m ihe yiri nke a banyere nke a ihe dika izu 2 gara aga. Ọ nwere nnukwu ozi nye ya na anyị niile kwesịrị ịnụ ọtụtụ mgbe 🙂 Nnukwu ihe!